Makaralı zvinokudzwa Self vakadengezera Scooters - Jomo Technology Co., Ltd
Makaralı zvinokudzwa Self vakadengezera Scooters
Kunyange zvazvo, imwe kwazvo nzira iri kutenga kubva zvechokwadi uye zvakanaka-vasina mutengesi kuti chakunodzikisira tarisiro upi kuitika yakadaro. Nzira iyi hamungagoni paunotaura mharidzo uye regai kunetseka chaizvo ari maererano kune motokari dzinenge dzichiuya. The 2 Wheel vakadengezera Scoote R kubudikidza Powerboard`s bhatiri upenyu kwakarurama, uye iwe uchava yokufara pamwe chikwata ichi nguva dzose sezvo zvakanaka. Unogona kuenda nokuda sikuta rine bhatiri chakarurama mairi kuona pachiyero nekugona bhatiri. Ona ADA zvinodiwa mawiricheya, mufambo Aids, uye Other Energy-Kumanikidzwa mufambo Gadgets paunogona kuverenga pano. Saka kudzidza 8.5inch Smart Balance sikuta Makaralı hoverboard makuru mavhiri K7 zvayakaita pano asati kunotenga payo. Heunoi akanaka kupima vhidhiyo kuti muchidimbu wandei ichi. On kuyengerera mapfekero, isu kubatanidza iwe kusvika nokutengesa pashure yako kudzidza pamusoro muchidimbu isu akaanyora uye ichange kuchiwana iwe kune chepamusoro mukati US
Unofanira kungotaurwa uchida kushandisa sikuta pakuzvivaraidza yokukosha kuzviriritira BALANCInG hoverboard vachatitaka mukuru zvakakwana. Uyewo Scooters ose kwenzvimbo, uye iwe unofanira kushandisa navo mumadhaka, sinou, migwagwa uye jecha hukawanika. Pakutanga, kuzviriritira BALANCInG hoverboard k7 iri 8.5inch mavhiri guru uye kure-mugwagwa izvo yakakodzera kumhenderekedzo mabhiza. Saka ane zvakanaka mabhiza ruzivo. Chechipiri, 500W Motors, simba simba. Chechitatu, Dual hurongwa motherboard, kuvandudza kushanda zvakanaka okuwana uye pashure-okutengesa. Kunze, zviri private muoti pamwe chete chimiro bvumidzwa, zvikuru nemamwe. Kunyange zvakadaro, boka waitsigira basa ruoko zvemitemo ane chinangwa kuti vachanyoresa kushandisa kwavo. Unofanira aritenge? Saka, usati kutenga hoverboard nechokwadi kuti ayo bhatiri riri zvinobudirira akadzivirira uye anouya ane wakanaka utariri uye kuchaja chikwata. Zvakanga vakapfuura Ul2272 setifaya?
The Powerboard kubudikidza Hoverboard kungava zvimwe zvikuru rinodhura kuzvipira vakadengezera Scooters ikoko uye mubvunzo wose kukumbirwa: "Hazvina mutengo mutengo? The Koowheel nokuzvidzora vakadengezera sikuta mutengo musoro chaizvo .Kutaura zvazviri, Koowheel ndikasafananidza kbps chigadzirwa kuti vatengi pangozi. Ndicho chinhu chakanakisisa kusarudzwa kana paine zvimwe kuva vaduku vana mabhiza nayo. The Self-vakadengezera sikuta K8 kubudikidza KOOWHEEL angava nyore chaizvo kushandisa, uye iwe chete vanofanira kuva nechivimbo chokuti uchakwanisa kuchengetedza chinhu nepo akatasva bhodhi iri. Features:
Hoverboard K8 akagadzira muMilan, zviri pakutanga EU musika customized
Yakavanzwa Bata design, nyore vakatapwa
Off mugwagwa vhiri design, abate meso nyore pakati nepakati yokutevedzera
Slim uye chiedza uremu
Green uri chitiviri
Ndezvipi zvakanakira ine?
Koowheel ndikasafananidza kbps zvigadzirwa
Hoverboard K8 anoramba ari Top yepamusoro mureza
Kungoshandisa Top bhizimisi kuti pcb, Motor, Charger
Chakavimbika kupfuura 24V 6.5inch hoverboard
Battery anosangana zvose vakachengeteka mitemo
Rakadzika chakaremara zvazvingava
Saka, ichi kuzviranga BALANCInG sikuta ane imwe yakanakisisa kuchengeteka nyaya vatasvi. Ipapo akaisa gumbo rimwe pamusoro swegway. Nokuti vaya vanoda chinhu vakarongeka uye vakagadzirira kubhadhara mutengo, zvino iyi ndiyo yakanakisisa sarudzo yako.
Post nguva: Aug-29-2017